Indlela yokufeza ukulalela kusuka kwengane?
Ekuziphatheni kwezingane, ngokuvamile kuvame ukugcina izimo ezinjalo lapho bephikisana nabazali babo bese beyeka ukuzithobela. Isizathu esiyinhloko salokhu kuziphatha ukuthi ingane kancane kancane ilahlekelwa ubuhlobo obethembayo nabantu abadala abaseduze naye. Nokho, abazali abaqondi kahle ukuthi kungani ukuziphatha kwengane yabo ethandekayo kushintshile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, iningi labomama nababekhona kulokhu kuxhumene nokudideka okukhulu futhi abazi ukuthi yini engenziwa ezimweni ezinjalo.
Cabanga ngesinye sezimo ezincane: ingane, ukudlala okuningi ngamathoyizi wakho ozithandayo, ngokuphambene nazo zonke izidingo zakho mayelana nokubasusa endaweni yabo efanele. Ngokuvamile, abazali bayasabela ekungalalelweni kwengane nokungalaleli, kodwa njengoba kungacatshangwa, ukuziphatha okunjalo kwabazali abakwazi ukufundisa ingane ukufeza izidingo zabantu abadala. Kubalulekile ukuzama ukuthola ezinye izindlela noma izikhuthazo zokuvusa ingane ekuphenduleni okudingekayo, ngakho-ke ukuziphatha. Isibonelo, unganikeza usizo lwabantwana bakho ekuletheleni indlu ngokuhlelekile. Ingane izokwazi ukuyiqonda kahle lokhu futhi ngokuqinisekile iyoyikhumbula lokhu.
Uma ngesinye isikhathi uhlangabezana nesimo esifanayo, cishe cishe umntwana uzobe esehamba ukukusiza. Konke ngaphandle kokuhlukile, abazali kufanele bakhumbule ukuthi ngamunye ozithathiwe ngokweqile akukakhuli umuntu omdala, kodwa kakade umuntu ozimele ozimele. Futhi njenganoma yikuphi abanye abantu, izingane nazo zivame ukwesaba noma zicasuliwe uma ziphoqelelwe ngokuqinile kunoma yini. Abazali kufanele bazibekele umgomo wokufunda ukuthi banganikeza kanjani izingane zabo izidingo zabo ngobumnene ngangokunokwenzeka, noma ngisho nangcono - ngokungenakuqonda.
Fundisa ingane ukulalela ngokuphelele emandleni kwanoma yisiphi isiwula esikhulile. Ngenxa yalokhu, izincomo ezilandelayo ezilula ziyadingeka:
Ungathukutheli noma uphakamise
Ngaphansi kwezimo ezingabangela, umuntu akufanele avumele ukuthi abonise imizwelo emibi. Uma ingane yenza okuthile ocasule kakhulu noma othukuthele, gcina zonke izinto ezimbi, kodwa ungayilahli ingane yakho. Lokhu akusizi ukumfundisa ukulalela okungenamthetho. Ngaphezu kwalokho, angase aqale futhi ukukwenza lokho okuhlukumezile, kuphela ukukuhlukumeza. Ngokusobala ukuqalekisa ingane nge-antics yakhe, uzokhula "wehla" igunya lakho emehlweni akhe. Kungenzeka ukuthi uzoqala ukugijima, azungeze yena futhi ayeke ukwethemba. Esikhathini esizayo, lokhu kungathinta kakhulu ubuhlobo bakho. Ingane ingaqala ukufihla okuthile, ucabanga ukuthi uzophinde uyikhumbuze. Esikhundleni sokumemeza nokuqalekisa, kungcono ukuchazela ingane ngokuthula lokho ongakuthandi, futhi umtshele indlela ongayilungisa ngayo.
Ungalinganisanga umsebenzi wakhe womzimba
Ungagcini inkululeko yengane yakho. Lokhu kusebenza kuyo yonke imisebenzi yakhe yomzimba. Vumela ingane ithande ukugijima, gxuma noma idlale ngaphambili, ukuthi uthanda kangakanani. Lokhu kumlethela imizwelo emihle futhi kusiza ukuphonsa amandla okuqoqwa, futhi njengoba sonke siyazi, unabantwana abaningi. Ukudlala okuningi nokukhathala, ingane yakho ngeke ifune ukwenza i-prank.
Kunconywa ukuthi uhlele imidlalo ehlangene kaningi ngangokunokwenzeka. Lokhu kuzokuvumela ukuba uqonde kangcono ingane yakho futhi kuzokuletha okuningi ngokwengeziwe. Isikhathi esiningi ochitha ukuhleka, ukukhuluma noma ukujabulisa ingane yakho, okuphakeme emehlweni akhe kuyoba igunya lakho lomzali. Kungenxa yemidlalo ongayichazela ingane lokho okufunayo.
Kumelwe ube nesineke esikhulu. Kunzima kakhulu ukuletha ukulalela emntwaneni. Le nqubo ayikwazi kwenzeke masinyane, ingabi yedwa ebusuku. Ngakho-ke, bonisa ukubekezela ngesikhathi esisodwa, lapho inqubo yezemfundo ingakunikezi imiphumela oyidingayo. Lokhu akusho ukuthi ngeke babonakale. Umphumela omuhle uzotholakala ngempela. Kodwa ngenxa yalokhu, ingane idinga ukunikezwa inani elidingekile lesikhathi ukuze ikholwe ekuhleleni okuqotho nangokwemvelo kwesondo le-svashi.
Yakha amathalenta afihliwe
Kubalulekile ukuthuthukisa amakhono omntanakho. Khuthaza ingane ingxenye enkulu yokubekezela, ukugxilisa ingqondo yakhe kwi-prose ehlukene futhi indlela engcono kakhulu yokuthola ukulalela kuye ngokugcizelela amakhono akhe. Noma yimuphi umntwana unalokhu noma lokho okubonakala kwamakhono. Abazali okufanele bawavule ngesikhathi noma abathole. Izingane zihlale zibonisa ukuthambekela kunoma yiluphi uhlobo lobuciko, umsebenzi noma izinto zokuzilibazisa. Qaphela ngokucophelela okubangela ukuba ingane yakho inentshisekelo yangempela. Ekugcineni, kuzodingeka unikele kuphela izifiso zakhe kanye nokuqala ngandlela-thile.
Futhi ungakhohlwa ukuthi zonke izingane ziswele isidingo sokudumisa. Yile ndlela abazali abangabonisa ngayo ukusekela ingane yabo. Cabanga ukuthi ubonga kaningi kangakanani ingane yakho. Inani elikhulu labazali abakucabangi ngalokhu nhlobo, futhi isikhathi ngasinye esingabalulekanga babonisa ukunganeliseki kwabo ngenkuthalo. Nokho, lapho umntwana eziphatha kahle futhi cishe, udumo luvame ukukhohlwa. Ngenxa yalokhu, kuvame ukubambezeleka ekuthuthukiseni ukuzethemba komntwana, okuyinto eyokuthinta ngokuzayo esikhathini esizayo. Kuphela lapho ukuziphatha okuhle kwengane nokuhle kwengane kungabonakali, kuyakhuthazwa ngentshiseko, ingane ngokwayo iqala kancane ukuzama isimo esinjalo senzosi ukuze ifanelwe udumo.
Khuluma ngezwi elifanele
Naka ithoni okhuluma nengane yakho. Uma uvame ukukhuluma njalo nengane yakho ngenjongo yokufundisa okungapheli, khuluma naye ngokucasula futhi usebenzise izinkulumo eziphakeme ekukhulumeni, ngeke neze akufune ukukulalela. Ngabo bonke abantwana ngaphandle kokunye, kubalulekile ukuxhumana ngokuthula kakhulu. Ngisho nasezikhathi zokungalaleli ingane nokuziphatha kwakhe okubi, umsindo ozolile uzoletha umphumela omkhulu kakhulu. Uma unesimo sakho sengqondo, cishe uyokhulula ukuhlukunyezwa kwakhe futhi kancane kancane azinciphe.
Ukuze uzuze ukulalela kweqiniso kwezingane, kubalulekile ukubanika ukunakwa okukhulu ngangokunokwenzeka. Ngendlela, zonke izazi zengqondo zezingane zisho lokhu ngokuzethemba. Uma ingane ingenangqondo, iziphatha ngendlela engcolile, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso sokuqala ukuthi ufuna ukuheha. Futhi okokuqala, abazali bakho. Ukuntula ukunakwa kubonakala buhlungu kakhulu kubo bonke abantwana ngaphandle kokuhlukile. Kodwa-ke, abantu abaningi abadala abaqondi kahle ukuthi kubaluleke kangakanani, ngokungafanele bakholelwa ukuthi umsebenzi wabo oyinhloko ukuhlinzeka ingane ngezingubo zokudla, ukudla nokufudumala. Kodwa kudingekile ukuba uchithe isikhathi esengeziwe ekukhulumisaneni nomntwana, ube nesithakazelo emcimbini wemicabango yakhe, izinto ezithandwayo zokuzilibazisa, njengoba uzobona ngokushesha ukuthi isidingo sokufuna ukulalela kwalolu cala sinyamalale ngokwawo. Ngesikhathi esifanayo, akukho okhethekile okwenzekile. Umntanakho nje uzizwa edingekile, okusho ukuthi uzoba nesifiso sokugcina okunjalo nganoma iyiphi indlela, kuhlanganise nokuziphatha okuyisibonelo.
Ungayifaka kanjani ingane yakho uthando lokuhlanzeka?
Indlela yokwenza ingane ngencwadi?
Ukukhulisa ingane ngendlela kaCecil Lupan
Ingabe kufanelekile ukujezisa ingane?
Indlela yokukhulisa izingane ngaphandle kokujeziswa?
Kuyini othintana naye?
I-cocktail ye-ayisikhilimu nama-strawberries
Ukuphulukisa i-rice mushroom
UKsenia Simonova: I-Short Story
Uphaya nge isipinashi kanye ne-Feta ushizi
I-Solyanka yayidla inyama
I-Garcinia isiCambodian - indlela yokulahlekelwa isisindo
Indoda ayichazi imizwa yakhe
Umlingisi omangalisayo uJury Stoyanov
"Quartet I" - i-quarterly comedy engcono kakhulu
Ukushayela nge-kiwi ne-peach jam